KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Isgaarsiintii Degmada Baardheere oo la Damiyay iyo Cabsi Dagaal oo Halkaasi ka Jirta
Sunday 18 March 2012 11:24
Isgaarsiintii Degmada Baardheere oo la Damiyay iyo Cabsi Dagaal oo Halkaasi ka Jirta
Kismaayo (Keydmedia) - Sida ay sheegayaan Wararka aynu maanta ka helayni degmada Baardheere ee gobbolka Gedo Isgaarsiintii degmadaasi ayaa gabi ahaanba hawada laga saaray, ayadoona aan ilaa iyo hadda sababta la garaneynin.
Deegaano badan oo gobbolka Gedo ka tirsan waxaa maanta ka jira cabsi dagaal oo aad u xooggan, waxaana in Isgaarsiinta hawada laga saaro loo aaneenayaa cabsidaasi dagaal iyo xiisadaha maanta Gedo ka jira.
Meelaha ugu daran ee ay cabsidu ka taagantahay waxaa ka mid deegaanada Taraka, Dhakaajo iyo Dheele waxaana ay deegaanadaasi ay masaafo aad u yar ay u jiraan degmada Baardheere oo ay kooxda Shabaabka difaac xooggan kaga jiraan.
Wararka aynu sidoo kale helayno waxaa ay tibaaxayaan in Isgaarsiintii degmada Baardheere ay si ula kac ah u jareen maamulka kooxda Shabaabka ee degmadaasi iyagoona ka cabsi qaba in loogu soo gabaado Isgaarsiinta.
Wixii ku soo kordha xaalada Gogoobolka Gedo markasta kala soco www.keydmedia.net